ငရဲမကြီးအောင် လိမ်မယ်နော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ငရဲမကြီးအောင် လိမ်မယ်နော်
Posted by ဆူး on Oct 14, 2010 in Arts & Humanities, Creative Writing, Short Story, Think Tank | 12 comments
လိမ်တယ် ညာတယ်ဆိုတာကတော့ မကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါ. တခါတရံ လိမ်မှ ရတဲ့ အခါတွေ ရှိတယ်.. လိမ်တယ်ဆိုမှတော့ သီလ ကျိုးပြိပေါ့နော်.. ရှိတာမှ ၅ပါးတည်း.. လိမ်လိုက်တော့ ၁ပါးကျိုးသွားကော.. မုသားမပါ လင်္ကာမချော ဆိုတဲ့ စကားတွေ လူတွေ အသည်းထဲ ရင်ထဲ စွဲနေတော့ လိမ်ရတာ လွယ်နေကြတာပေါ့.. ဒီတော့.. ငရဲလည်း မကြီးအောင်.. အကုသိုလ်လည်း မဖြစ်.. လိုရင်းလည်းရောက်အောင် လိမ်မယ်.. စဉ်းစားမိတာလေး ကောက်ရေးလိုက်မယ်..
မဟာမြိုင်တောကြီးထဲမှာ တပါးတည်း သတင်းသုံးနေတဲ့ မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး (ဘွဲ့နာမည် စာလုံးပေါင်းမေ့) အဲဒီ ဆရာတော် ကြီးကို သွားဖူးတဲ့ လူတွေကို ဆုံးမ သြ၀ါဒ ပေးတာလေး တင်ပြပေးမယ်။ တခါက အရှင်မဟာ ကဿဖ ကိုယ်တော် တပါးတည်း တောထဲမှာ သတင်းသုံးပြီး နေစဉ်မှာ.. ခိုးသား တယောက် ဖြတ်ပြေးသွားတယ်.. ခိုးသားနောက်က အမှုထမ်းတွေ လိုက်လာကြတယ်.. နောက်တော့ အမှုထမ်းတွေက ဘုန်းကြီးမြင်တော့ ထိုင်ကန်တော့ပြီး ဘုန်းကြီးကိုမေးတယ် အရှင် ဘုရား ဒီနားမှာ သူခိုး တယောက်ပြေးသွားတာ မြင်မိလား.. ဘုန်းကြီးက ဒီနားပြေးတယ် လို့ တိတိကျကျ ပြောလိုက်လို့ မိသွားရင် ဘုန်းကြီး ပါရာဇိကအာပတ် သင့်ပြီး ကံထိုက်အုန်းမယ်.. ဒီတော့.. မသိဘူးလို့ပြောရင်လည်း မျက်စိရှေ့ကနေ ဖြတ်ပြေးသွားတာ အတိအကျကြီး မြင်နေတာဆိုတော့.. လိမ်ရာ ကျအုန်းမယ်.. ဒီတော့.. အရှင်မဟာ ကဿဖ ကိုယ်တော်ကြီးက သူရပ်နေတဲ့ နေရာကနေ ခြေထောက် တနေရာစာ မသိသာ ရွေ့လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ မင်းအမှုထမ်းများကို.. ဒီနေရာမှာတော့ မမြင်မိဘူးကွဲ့.. အဲသလို ဖြေလိုက်သတဲ့.. ပထမ ရပ်နေတဲ့ နေရာမှာ မြင်လိုက်တာနဲ့ နေရာရွေ့လိုက်တဲ့ နေရာမှာတော့ ဖြတ်ပြေးတာ မမြင်မိဘူး.. အဲဒီလို အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြောလိုက်တာပါ.. ဒါကတော့ မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောတဲ့ တရားထဲက နေ ထုတ်နုတ်ပြီး သဘောကျတာလေး ပြောပြတာပါ။
ဈေးရောင်းဈေးဝယ်.. ၀ယ်သူဈေးစစ်ရင် ဒါအရင်းဘဲ မရဘူး ပြောပြီး ပေးလိုက်တဲ့ ဈေးသည်တွေ တပုံကြီး.. အရင်းဘဲ မပြောဘဲ.. မကိုက်လို့ပါ လို့ ပြောရင် အရင်း ဘယ်လောက်လဲ ဘယ်သူမှ ရိုက်မစစ်ဘူး.. တချို့ကိစ္စတွေ သတိမထားမိဘဲ လိမ်မိ တာတွေ ဖြစ်နေတော့.. မလိမ်ဘဲ.. အမှန်အတိုင်းနဲ့ ကိုယ်မသိစေချင်တာလေးတွေ ဖုံးကွယ်ပြီး ထားလို့ရတဲ့ စကားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ မြန်မာ စကားလောက် ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝတာ မြန်မာ စကားဘဲ.. တခုခုကိုပြောချင်ရင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သိအောင်ပြောလို့ရတယ်.. အဲဒီလိုဘဲ.. စာဖတ်သူတို့ တနေ့တာမှာ အမှတ်မမဲ့ လိမ်မိသလို ဖြစ်မဲ့ စကားတွေ များရှိရင် သတိထားပြီး ရှောင်ကျဉ်ဖို့ နှင့် မဖြစ်လို့ လိမ်ရတယ်ဆိုရင်လည်း အထက်က ရှင်မဟာ ကဿဖ လုပ်သလိုမျိုး လိမ်ဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါသည်။
ဒီခေတ်တော့ ..ဆရာတော်ကြီးအဲဒီလိုလိမ်ရင်… သူခိုးနဲ့ကြံရာပါအမှုနဲ့ဆွဲခံရမှာပါပဲ..။
သူခိုးမိရင်…ပြန်တွက်ခိုင်းလည်းပေါ်မှာပဲ..။ ဆရာတော်ကြီးကို ..တရားရုံးတင်ပြီး… တရားသူကြီးကစစ်လည်းပေါ်တော့မှာပဲ..။
သူခိုးက နျူကလီးယားဗုံးလုပ်မလို့ .. အိုင်စီချစ်ပ်တခုကို ခိုးပြေးတဲ့သူဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ..။
ငါ့လက်ကလွတ်ဗြွတ်..ဆိုတာမျိုးကြီးမို့ … ဒီတရား…သိပ်အစာမကြေမိပါ..။
ဒါဆို ကိုယ်ဖျောက်နေသင့်လား.. သူခိုးလည်း မမိ မင်းမှုထမ်းလည်း မတွေ့မိအောင်.. ကိုယ်ပျောက်စေသတည်း.. ဆိုပြီးတော့
ဒါနဲ့ ဦးသုခ ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ရဟန်းမစားရတဲ့ ဆွမ်းတနပ် ကားထဲကလို အသေ သတ်ချင်သတ် မပြောဘူး.. အသေအရိုက်ခံ လိုက်တာ ကောင်းမလား.. ဒါဆိုရင် ရိုက်မိတဲ့ လူတွေ အပစ်သင့်လို့ မြေမြိုသွားအုန်းမယ်နော်.. အစာမကြေရင် လျှာပွတ်ဆေးလေး သောက်.. လေထိုး ဗိုက်နာ ဗိုက်အောင့် ကောင်းတယ်.. ခဏနေရင်တော့ မော်တော်လေး ထွက်သလို လေထွက်သွားရင် နေကောင်းသွားမယ် ဆရာရေ…
ကြက်သားရေထိုးပြီးရောင်းတာကရောလို့ … တစ်နေ့ဈေးသွားဝယ်တော့လေသိလား … သမီးက ၀ယ်ပြီးသား အသားကို အသားသက်သက် အရိုးသက်သက် လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ … ဟိုဘက်လှည့်နေတုန်း အသားတုန်းကို ခုတ်ပြီး ပြန်ယူထားတာ သူ့ဘက်ပြန်အလှည့်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီးမြင်လိုက်တာ … သူကခပ်တည်တည်ပဲ … ဘာမှတော့မပြောခဲ့ရဘူး ရန်တွေ့လွှတ် လိုက်မှဖြင့် – – – ဈေးသည်ရန်တွေ့တာကို သမီးကဘယ်နိုင်ပါ့မလဲလို့ …
ဆူးရေးထားတာလေးကောင်းတယ်။ လိုက်နာသင့်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ အကုသိုလ်ကံကြောင့် တစ်မျိုးလုံးပြုတ်အောင်သွေးမြေကျမယ့်စစ်ပွဲကြီးကို ကြိုမြင်ခဲ့ပေမယ့် မကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကို ကြည့်ရင် သတ္တ၀ါတွေက ကိုယ့်အကုသုလ်နဲ့ကိုယ်အကျိုးပေးကြမှာမို့လို့ ကိုယ့်ဘက်ကတော့ သီလမကျိုးပေါက်ပဲနဲ့ ကုသုလ်ဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းသိမ်းရမှာပဲ။ သူခိုးက သူခိုးအလုပ်လုပ်နေသလို သူတော်ကောင်းကလဲ သူတော်ကောင်းအလုပ် လုပ်ရမှာပဲ။ ရောထွေးလိုက်လို့မရပါဘူး။
အမှုထမ်းတွေက ဘုန်းကြီးမြင်တော့ ထိုင်ကန်တော့ပြီး ..ဆိုတာလေးပါသမို့ … သုံးသပ်ပြောကြည့်ရရင်..
ဘုန်းကြီးက ..အဲဒီသူခိုး..ဟိုဖက်ပြေးတယ်..။ သေသေချာချာညွှန်ပြီးပြောသင့်ပါတယ်။
မိရင် ချက်ချင်းရိုက်မသတ်ပဲ ငါ့ဆီခေါ်ခဲ့ဖို့ လို့မှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ေ၇ာက်လာရင်..သူခိုးေ၇ာ။ အမှုထမ်းတွေရောကို တရားတော်နဲ့အညီဆုံးမရပါမယ်။
ခိုးသူကို ခိုးရင်ကျမဲ့အကုသိုလ်တွေ.. အပြစ်တွေဟောပြောပြီး နောက်နောင်မခိုးအောင် ဆုံးမရပါမယ်။
အမှုထမ်းတွေက သတ်မှာပဲဆိုရင် ချက်ချင်းရိုက်မသတ်ပဲ ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ဖို့ မင်းကျင့်တရား၊ မင်းမှုထမ်းတရားတွေ ဟောပြ၇ပါမယ်။
အဲဒါတောင်မှ ..မင်းမှုထမ်းတွေက သူခိုးအပြစ်ကသိပ်ကြီးသမို့ ချက်ချင်းကိုသတ်ကိုသတ်မှာပဲဆိုရင်တော့ ..
ဒါက ရဟန်းမို့လို..ဒီလိုလုပ်သင့်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ လူဆိုရင်တော့ ..တမျိုးပေါ့။
ဘုန်းကြီးဘွဲ့တော်တွေထည့်ရေးပြီး… လိမ်နည်းသင်ပေးနေတာမို့ .. ဒါကိုတော့.. အစာမကြေပါလို့ ပြောမိတာပါ။ တခြားဘာသာဝင်တွေအထင်အမြင်လွဲနိုင်တာပေါ့..။ ဒီမှာက ဘာသာပေါင်းစုံက.. လူပေါင်းစုံလာဖတ်နေတာလေ..။
အဲဒီတော့… ဘာမီတွန်ထည့်ကြိတ်ထားတဲ့…လျှာပွတ်ဆေးလေး လောက်နဲ့ဘယ်ပျောက်ပါ့တော့မလဲ..။
နိုင်ငံခြားဆေး … လေထဗိုက်နာပျောက်တယ်လို့ သုတေသနလုပ်ထားတဲ့.. ဂျဲလမက်လောက်မှ ရမှာ..။
လူဆိုတာက တသက်လုံး..လိမ်နေရတာပါပဲ…။ မလိမ်လို့မဖြစ်တာတွေအများကြီးပါပဲ…။
မတရားဘူးထင်၇င်.. ပြောသာပြော..။ တရားတာတွေဖြစ်လာဖို့ အဓိက.. လိမ်ပြောလို့သီလပျက်မယ်ဆိုရင်လည်း.. ပျက်တာက သာမည..။
မစ္ဇျိမ ပဏ္ဏာသ ပါဠိတော် ပါစကားခြောက်ခွန်း..
(၆) မဟုတ် မမှန် အကျိုးလည်းမရှိ သူများလည်း မကြားနာလိုသော စကား၊
ဘုရားရှင် တို့မှာ ပ- ဒု စကား နှစ်ခွန်းကို သာ သင့်လျော်သလို သုံးစွဲတော်မူကြသည်။
စကားကောင်း တို့ရဲ့ အင်္ဂါ (၄) ပါး(သဂါထာဝဂ္ဂ သံယုတ် ၊ သုဘာသိတ သုတ်) – (အစဉ်အတိုင်း အမြတ်စကား.)
ဆိုတော့.. မှန်သောစကား၊ ဟုတ်မှန် တဲ့စကား(မုသားမပါတဲ့စကား) ဘယ်နေ၇ာတန်းမှာ ရှိသလဲ သိသာဖို့ပါ။
လူမှုကိစ္စတွေက လူ့ဘောင်နဲ့ဝေးရာမှာ နေသူတွေဆီကိုတောက် ကူးစက်တဲ့သဘောကို ဆောင်တယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အပြစ်မလွတ်ပါ။ မြင်းတစီးနဲ့ သာအဖပုံပြင်လို အပြစ်တင်သူဖက်ကသာ အသာစီးရမဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုသူတဖက်သား ထိခိုက်မဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ ကိုယ်မှာလည်း တာဝန်မရှိ၊ ဆိုလိုတာက ရှင်မဟာကဿပလို တောထဲသွားပြီး လူတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေသူဆိုရင် ဘယ်ဖက်မှ မပါ၊ လွတ်အောင်နေတာကို သဘောတူပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့ လူ့ဘောင်ထဲမှာပဲ လူတွေနဲ့နီးနီးစပ်စပ်နေရင်တော့ လူ့စည်းကမ်းကို လိုက်နာသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ သူ့ကံနဲ့သူ့အကျိုးပါ။
စကားစပ်လို့ ဝိနည်းလွတ်ပြောတဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးကို မျှပါရစေ။ လင်လုပ်သူက သူ့ရဲ့မိန်းမ ရပ်ဝေးမှာနေတုန်း ဖောက်ပြန်တာကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံသိတော့ စကားများကြရင်းနဲ့ နင်ဘာလို့ ငါတို့လှမ်းမေးတုန်းက မနာလိုသူတွေ ပြောကြတာလို့ဖြေလည်းဆိုတော့ မိန်းမက ငါအမှန်အတိုင်းပြောခဲ့တယ်၊ မဖောက်ပြန်ဘူးလို့ မပြောလို့ ဆိုပါတယ်။ စကားလုံးတွေကို ပြန်ကောက်ကြည့်တော့ ဟုတ်သားပဲ၊ သူမမလိမ်ခဲ့ပါ။
လူတွေကြားနေ..လူတွေလှူတဲ့ဆွမ်းစားပြီး.. လူတွေကို တရားမပြ၊ မဆုံးမ တခေါက်တောင်မကျိုးစားကြည့်ပဲ သူ့ကံနဲ့သူ့အကျိုးလို့ နေနိုင်ရက်တဲ့ရဟန်း.. ရှိသေးလို့လား ကိုရင်ကြောင်ကြီးရယ်..။
ကိုရင့်မိန်းမက … ပါးစပ်နဲ့သာမလိမ်တာ ..စိတ်က လိမ်ပြီးနေတာပဲ..။
ကာယကံ၊၀စီကံ၊ မနောကံမှာ .. ကာယကံ၊မနောကံအရ ပြစ်မှားပြီးမှ ၀စိကံအရ ..စကားကြီး ၁၀ခွန်းနဲ့ လှည့်ပါတ်ပြောတာပဲ..။
ဗုဒ်ဓဘာသာမှာ မနောကံက အရေးအပါဆုံးမဟုတ်လား..။ ဒီတော့.. ဒီလိုလုပ်ရင်လည်း သီလ ကျိုးမှာပဲ။
နောက်ပြီး.. အဲဒါမျိုးမိန်းမ .. လင်ကသာ မသိလို့ခံလိုက်ရတယ်ရှိမယ်.. သိတဲ့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ခွင့်လွတ်မယ်မထင်ပါဘူး..။
ကိလေသာအာသဝေါ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ ရဟန္တာဖြစ်သွားရင် နေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သူတို့အဖို့တော့ အရာရာဟာ အကြောင်းနဲ့အကျိုးပါ။ အရင်ကလုပ်ခဲ့လို့ အခုပြန်ခံရတာ၊ မကျေနပ်ရင်လည်း ပြန်လုပ်ပြီး ပြန်ခံကြပေါ့။ ရှင်မဟာကဿပက ရဟန္တာဖြစ်လို့ နေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လူတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီး နေရင်တော့ ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့လည်း လူ့စည်းကမ်းကို လိုက်နာရမယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။ ပရမတ် သဘောတရားတွေမှာ သူခိုးမရှိ၊ဒမြမရှိ၊ လူမိုက်မရှိ၊ လူကောင်းမရှိပါ။ ရုပ်နဲ့နာမ်၊ ပြုသူနဲ့ဖြစ်သူ သင်္ခါရ သဘောတရားတွေသာရှိပါတယ်။ သံသရာမလွတ်သ၍ လူကောင်းဖြစ်လိုက် လူဆိုးဖြစ်လိုက်။ ရဲဖြစ်လိုက် သူခိုးဖြစ်လိုက်မို့ ယခုဘဝမှာ ကြုံလို့တွေ့သူများအပေါ် ဘယ်သူက မှန်တယ် မှားတယ်လို့ လိုက်ပြီးပညတ်မတင်တော့ပါ။ ဒါမျိုးတွေကိုတော့ လူ့လောကမှာလုပ်မရပါ။
လူတွေကြားနေ..လူတွေလှူတဲ့ဆွမ်းစားပြီး.. လူတွေကို တရားမပြ၊ မဆုံးမ တခေါက်တောင်မကျိုးစားကြည့်ပဲ သူ့ကံနဲ့သူ့အကျိုးလို့ နေနိုင်ရက်တဲ့ရဟန်း.. ရှိသေးလို့လား ကိုရင်ကြောင်ကြီးရယ်..။ << လူတွေနေတဲ့ ကိလေသာတော ကနေ ခွာလို့.. ဆိတ်ငြိမ်ရာ အရပ်မှာ နေတာပါ။ နောက်ပြီး ရဟန်းတွေ က တောထဲမှာ သတင်းသုံးရင် သစ်ပင်တပင်က ကျောင်းတဆောင်လို သဘောထားပြီး နေလို့ရပါတယ်တဲ့.. ရဟန်း အတွက် ဆွမ်းကိစ္စဆိုတာ လည်း မပူရဘူး ထင်တယ် ဘယ်လောက် တောထဲမှာ သီတင်းသုံသုံး မြို့ရွာတွေမှာ ဆွမ်းခံကြွလို့ရတယ်။ စာပေထဲမှာတော့ ဈန်အဘိဥာဉ် ရတယ် ဆိုရင် ကောင်းကင်မှာ ပျံနိုင်တယ်လေ။ သစ်ပင်လှူရင် ကျောင်းလှူတာနဲ့ ကုသိုလ် တူတူဘဲလို့တောင် ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး သူခိုး က သူခိုးတာ မင်းပိုင်ပစ္စည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. အမှုထမ်းကို ခေါ်လာခဲ့ ငါဆုံးမမယ် လို့ ပြောပြီး ဆုံးမတိုင်း တရားရထိုက်တဲ့ လူမှ တရားရမှာပေါ့.. သူဠေးပိုက်ဆံ ၁၀၀ ဆင်းရဲသား ပိုက်ဆံ ၁၀၀ မတူညီပါဘူး.. အရေအတွက်သာ တူမယ်.. ပိုင်ဆိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း မတူတဲ့အတွက်.. သူအတွက်က ခိုးသူဒဏ်သင့်လို့ လျော့သွားတယ်. သို့သော်.. ခိုးသူက မိသွားရင် သေသွားနိုင်တယ်.. မသေရင်သော် ခြေလက်တွေ ဖြတ်ရေထဲမျှော် တာတို့.. တကျင်လျှိုပြီး အများ အမြင်မှာ ကြည့်စေ ဆိုပြီး မသေမချင်း ပစ်ထားတာမျိုးတွေ လည်း ရှိတယ်လေ.. နောက်ပြီး ခိုးသူက ငတက်ပြားလို့ သူခိုးမျိုး ဆင်းရဲသူကို စောင့်ရှောက်သူ ဆိုရင်ကော.. နူကလီးယား လက်နက်တွေ အဲဒီ ခေတ်မှာ မပေါ်သေးတော့.. ဝေးဝေး စဉ်းစားမနေပါနဲ့.. ခတ်နဲ့ လျှော်ညီစွာ နီးစပ်အောင် စဉ်းစားပေးပါ။ ဘယ်နေရာ မဆိုတော့.. မျိုးစုံ စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။
ရဟန္တာ ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟာ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ အကျိုးအကြောင်းကို သိပြီး ဖြစ်နေပါပြီ .. ဒါကြောင့် နှစ်ဖက်စလုံး အပြစ် မကြီးကြစေဖို့ .. အပြစ် မများကြစေဖို့ လိုအပ်သလို ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ် .. ခေတ်ကိုက ဒီဘက်ခေတ် မဟုတ်ဘူးလေ ..
အပြစ် တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်တောင်မှ ၀ဋ်ဘေးက လွတ်နိုင်တာမှ မဟုတ်တာ .. ယတြာ ဘယ်လောက်ချေချေပေါ့ ..
ဒါကြောင့် ရဟန္တာတို့ရဲ့ အရေးအရာကို လူတွေ မဝေဖန်တာကောင်းတယ် .. မှားပြီး ဝေဖန်ရင် အပြစ်ရှိတယ် ..